I-Zu San Li isisu seMeridian Acupressure Guide
I-Zu San Li - I-Star-Star ye-Meridian System
Mhlawumbi ininzi yeengcambu ze-acupuncture - ngokwenene "i-rock-star" yenkqubo ye- meridian - nguZu San Li: indawo engama-36 kwi-meridian yesisu. I-Zu San Li - eguqulela kwisiNgesi njenge "Leg Leg Li" - ithola igama layo kwi-legend ngokumalunga nendlela umhambi otyhafile (ngelo xesha ukuhamba kwakukho ngeenyawo) owakhuthaza iZu San Li uza kuthi anikwe amandla ukuba bakwazi ukuhamba ngokulula ii-li ezintathu ezongezelelweyo: elilinganayo malunga neekhilomitha.
NgesiTshayina, kukho enye igama elithi "Li" - igama elinguLie wokuqala, kodwa lihambelana nomntu ohlukileyo - inentsingiselo yakhe "ukulawula okanye ukulungisa." Oku kubonisa amandla e-ST36 ukulawula ukusebenza kwePleen kunye Iinkqubo zesebe zesisu; ukulawula iQi neGazi; kunye nokulawulwa kwezi zintathu (oko kukuthi "zitshatshazi ezintathu") - zonke ezihamba ngokubanzi kwi-accounting malunga nekhono loko lokubonelela iJusi kweso sithathu esongezelelweyo sokuhamba ngeenyawo.
Kanye nomsebenzi jikelele wokunqongophala kweemeko - ngokulawula i-Pen ne Isisu, kunye ne-Qi ne-Blood-Zu San Li isetyenzisiweyo, ngokukodwa, ukunciphisa umtya wokutya kunye nezinye izifo, kubandakanya: intlungu yesisu , ukuhlanza, ukunyanzelisa, ukucima, ukuvalelwa esiswini, ukuhanjiswa kwesisu, isifo somzimba, ukuzithemba, intlungu emadolweni okanye emlenzeni, isifuba, ukukhwehlela, utywala kunye nokulala.
I-Zu San Li itholakala ngaphantsi kweedolo, enyameni nje ngaphandle kwesikhanyiso, kwaye kulula kakhulu ukusebenzisa i-acupressure.
Umncinci omncinci ngokwenene ufumanisa le ngcaciso ngokuchanekileyo, ngoko siya kuthatha inyathelo ngesinyathelo.
Indawo esemthethweni ye-ST36 (iLig Three Li) yile: yintambo emithathu ngaphantsi kwemida engaphantsi kwe patella (ukuxinezeleka nje kwe-latal kwithenda ye-patellar), omnye umgangatho wesinwe kwi-front of the tibia.
(Uvakala kancinci, kodwa ungakhathazeki - emva kokuba uqikelele okokuqala, kuyinto elula kakhulu.)
ICun - Unit of Measurement
I-cun iyunithi yokulinganisa esetyenziselwa ukutyunjwa. Ngamanye amaxesha liguqulelwa ngokuthi "intshi" - nangona akufanele kuthathwe ngokoqobo ukuba ithetha intshi enye efunyenweyo, yithi, kumlawuli oqhelekileyo okanye umlinganiselo weetape. Umgama ochanekileyo we "ngununu" uhambelana nomzimba womntu onokuthi umgangatho wakhe oza kubakho. Ngamanye amazwi, "i-cun" yam kunye ne "cun" yakho ayiyi kuba ngumgama omnye.
Umgama "weethathu ezintathu" (esikufunayo ukufumana ST36) ngumgama, emzimbeni wakho, ukusuka ngaphandle komnwe wakho wokuqala ngaphandle komnwe wakho we-pinky, xa iminwe iyakwandiswa, kwaye ucinezele kakuhle. Ngamanye amagama, umgama owenziwe kwiminwe yakho emine (ngaphantsi kwesithupha) kwindawo ephakathi. Ngulo mgama oza kusebenza njengeteksi yakho, ukuze ufumane iZu San Li.
Indlela yokufumana iZu San Li - ST36
Ngomdolo wakho unamathele, kwaye umlenze wakho ukhululekile, fumana umda ophantsi we-knee-cap, kwaye ngokukodwa iincinci "ezincinci" ngapha nangapha kwetoni ephakathi. Isiqalo sethu sokuqala sokufumana i-ST36 siya kuba sesingaphandle kwezo zibini zincinci - elikufutshane nomda wangaphandle lomlenze wakho.
Ukusebenzisa umlinganiso wakho womunwe "onomlinganiso" (olingana namanqatha amathathu), faka umda wangaphandle womnwe wakho wokuqala kuloo mzuzwana kufuphi nomgca ongezantsi we-kneecap yakho - uvumele ezinye iminwe zibe phantsi kwi-bone yakho. Isaziso apho umda wangaphandle we-pinky yakho uwa, oko kukuthi enye indawo ekupheleni "ye-tape-measure" iyawa. I-Zu San Li yile nqanaba emlenzeni wakho-nje kuphela ububanzi bomunwe ukuya kummandla ongaphandle (ngaphandle kwe) umgca we-shin yakho.
Ukucwiliswa kwiLig yeLithathu
Emva kokuba ufumene i-ST36, ngomlenze owodwa okanye kwimilenze yomibini ngexesha elilodwa, sebenzisa nayiphi na umnwe uvakalelwa kakhulu ukuba usebenzise imodareyitha kwingcinezelo encinci, kwindlela enokuthanda ngayo (qalisa imizuzu 2-3). Phawula indlela ozivakalelwa ngayo. Ipropressure protocol edibanisa i-Zu San Li ST36 kunye no- Gu LI4 yindlela efanelekileyo yokuqinisa nokuhambisa iQi yomzimba wonke: enye enye enye ikomityi yekhofi enye!
Imigaqo yokugwetywa kweziyobisi
Iphi na iphi i-Bestheadhead Fishing Fishing?
Iindaba Zezingane Ngokuzibonakalisa Wena
I-Biographie of Diminutive Jedi Master Yoda
Inkcazo ye-Hygroscopic (iKhemistry)
Indlela Yokudala Imidwebo Yothando Nothando